I-La Caixa kunye ne-ImaginBank ngoku ziyahambelana neApple Pay | Iindaba zeGajethi
I-La Caixa kunye ne-ImaginBank ngoku ziyahambelana neApple Pay
URuben inyongo | | Izaziso
Kancinci kancinci iibhanki ziyajoyina intlawulo ngeApple Pay. Ukuza kuthi ga ngoku, iSantander, iinkonzo zezezimali ezivela kwiivenkile ezinkulu zeCarrefour, iAmerican Express kunye nezinye sele zikhona eSpain. Nangona kunjalo, U-La Caixa walumkisa kwiiveki ezidlulileyo ukuba phambi kokuphela kwalo nyaka u-2017 ufikile. Kwaye loo mzuzu sele ufikile.
Abathengi bangoku I-La Caixa kunye ne-ImaginBank (inkonzo yeziko ekwi-intanethi) iya kuba nakho ukongeza amakhadi abo etyala-kunye ne-debit-amakhadi kwinkonzo yokuhlawula ye-Apple Pay. Inkonzo iyasebenza ukusukela namhlanje, ke yonke into ekufuneka uyikhethile sisixhobo ofuna ukuqala kuso ukusebenzisa iApple Pay enxulunyaniswa neakhawunti yakho yeLa Caixa kunye neImaginBank yiyo ke leyo.
Siyakukhumbuza ukuba wenze iintlawulo ngezixhobo eziphathwayo ungasebenzisa zombini i-iPhone, iApple Watch kunye ne-iPad. Zombini kwi-iPhone nakwi-iPad kuya kufuneka uye kwi "Wallet" function. Nje ukuba ungene ngaphakathi, kuya kufuneka ukhethe ukhetho «Yongeza ikhadi lamatyala» kwaye uqale ukufaka ulwazi lwekhadi lakho elifanelekileyo. Ukusukela ngoko ukuya phambili, icandelo lebhanki yakho liqala apho kufuneka uqinisekise khona idatha oyinikezileyo kwaye unike ithuba lokuba uqale usebenzise iApple Pay.
Kwimeko ye-Apple Watch, kuya kufuneka uye kwicandelo le "Clock" kwi-iPhone. Ukuba uneewotshi ezahlukeneyo ezinxulumene neselfowuni yakho, khetha leyo uyifunayo uze ubuyele kwicandelo le-«Wallet». Kwakhona kufuneka ufake iinkcukacha zekhadi kunye ne-voila, ukuze lindela ukuqinisekiswa kwebhanki yakho. Kule meko, iLa Caixa okanye ngenkonzo yayo ye-ImaginBank.
Ngokufanayo, ukuba unemibuzo malunga nokuba ikhadi lakho langoku liyahambelana na okanye hayi, eyona nto intle kukuba uye kwi-ofisi ekufuphi kuwe kwaye ngabo bakuqinisekisayo ngaphambi kokuqala onke amanyathelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-La Caixa kunye ne-ImaginBank ngoku ziyahambelana neApple Pay
IRazer Blade Stealth kunye neRazer Core V2, eyona nto iphambili kwimidlalo
I-DOOM yeNintendo switchch iza ngoNovemba 10